विनी हैकरले उनी ओबामा समर्थक भएको खुलासा गरे - पप संस्कृति
विनी हैकरले खुलासा गरे कि उनी ओबामा समर्थक हुन् जसको कारण उनको पर्खालमा डोनाल्ड ट्रम्पको तस्वीर रहेको कारण लगभग रद्द भएको थियो।
टिकटक स्टार विनी हैकर पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा को समर्थन को पुष्टि गर्न को लागी अगाडि आएकी छन्, नेटिजनहरु लाई यो अनुमान लगाए पछि कि उनी डोनाल्ड ट्रम्प को आफ्नो बेडरूम को पर्खाल मा तस्वीरहरु पहिलेको टिकटक मा देखिए।
Vinnie हैकर सबैभन्दा राम्रो आफ्नो POV र सामग्री को विविधता को लागी TikTok मा परिचित छ। भिन्नी हैकरले सामाजिक दस्ताने कार्यक्रम मा भाग लिईन् र उनी आफ्नो उपस्थिति को लागी भुक्तान गरिएको थिएन भनेर दावी गर्ने पहिलो व्यक्ति थिए।
विनी हैकरको १५ जुलाईको जन्मदिन पछि यो दोस्रो पटक हो कि बिभिन्न प्रयोगकर्ताहरु लाई अनलाइन 'रद्द' गर्न को लागी प्रयास गरीएको छ। पहिलो थियो जब ऊ एक धारा मा धेरै छिटो बोलीयो र नेटिजेन्सले गलत मानीन् कि उनले ए कालो नस्लीय फोहोरी।
भर्खरै आफ्नो पेज मा टिकटक मा, विनी हैकरले उनको भित्ता मा ट्रम्प को तस्वीर भएको बारे मा टिप्पणी स्वीकार गरे।
कसरी ठूलो talkers संग व्यवहार गर्ने
'तेसैले मानिसहरु मलाई रद्द गर्दै थिए किनकि मेरो भित्तामा ट्रम्पको तस्वीर थियो। यो ओबामा हो! ती सबै ओबामा हुन्! '
विन्नी हैकरले आफ्नो पर्खालमा बराक ओबामा क्यालेन्डर देखाए पछि उनी अर्को पानामा पल्टिए। ह्याकरले आफ्नो भित्तामा प्रमाण देखाउँदा जोडले आफ्नो आवाज उठाउँछ।
इन्स्टाग्राममा यो पोस्ट हेर्नुहोस्
Def Noodles (fdefnoodles) ले पोस्ट साझा गर्नुभयो।
विन्नी हैकरको टिकटकमा प्रशंसकहरुको प्रतिक्रिया छ
विन्नी हैकरको पोस्ट इन्स्टाग्राममा प्रयोगकर्ता defnoodles द्वारा साझा गरिएको थियो र एक हजार लाइक र अट्ठालीस टिप्पणी संग भेटिएको थियो। धेरै प्रयोगकर्ताहरु नेटिजेन्स जो उसलाई रद्द गर्न चाहान्छन् को बिरूद्ध ह्याकर को रक्षा गर्दै थिए।
त्यहाँ के कुरा गर्न को लागी छ
एक प्रयोगकर्ता विशेष गरी भनिएको छ:
'कोही कृपया यो मान्छे लाई बाँच्न दिनुहोस् मलाई थाहा छ ऊ एक तकिया rn मा चिच्याईरहेको छ।'
एक अन्य प्रयोगकर्ता Vinnie हैकर को रक्षा मा टिप्पणी गरे:
'उह यस्तो [एन] समस्या नभएको राजा।
प्रयोगकर्ताहरु अफवाहहरु को लागी हैकर को दृष्टिकोण बाट पनि खुसी थिए। कतिपयले उनको प्रतिक्रियालाई हास्यास्पद भने। धेरै प्रयोगकर्ताहरु लाई रद्द संस्कृति को राज्य मा टिप्पणी, जो सधैं रचनाहरु को बिरुद्ध प्रयोग को लागी सामग्री को लागी खोज गरी रहेको छ।
इन्स्टाग्राम बाट स्क्रिनसट
चीजहरु जसले मलाई फरक बनाउँछ
प्रेमिकाले मलाई उसको कार्यको लागी दोषी ठहराए
विन्नी हैकरको भित्तामा ट्रम्पको तस्बिरहरु मानी रहेको मूल टिप्पणीहरु तब देखि मेटाइएको छ। Vinnie हैकर आफ्नो विभिन्न सामाजिक मिडिया ह्यान्डल मा स्थिति मा कुनै टिप्पणी गरेको छैन।
यो पनि पढ्नुहोस्: 'उहाँ एक अद्भुत, अचम्मको व्यक्ति हुनुहुन्छ': एडिसन रायकी आमाले आफ्नी छोरीको प्रेमी, ओमर फेदी, लाई अनलाइन घृणा बाट बचाउनुभयो
मद्दत Sportskeeda पप संस्कृति समाचार को आफ्नो कवरेज सुधार। अब ३ मिनेट सर्वेक्षण लिनुहोस्।
के गर्ने जब तपाइँलाई माया लाग्दैन
उसले मलाई किन माया गर्दैन?
चीजहरु यति गर्न को लागी जब तपाइँ बोर हुनुहुन्छ
कसरी बताउन यदि उनी तपाईंलाई मन पराउँछन्
बबी हेनान र गोरिल्ला मानसून
मलाई केटा मन पर्छ भने के गर्नु पर्छ?